महानगरका मेयर र उपमेयरबीच झगडा, बैठकमा हात हालाहाल !
ARCHIVE, POLITICS » महानगरका मेयर र उपमेयरबीच झगडा, बैठकमा हात हालाहाल !
काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरका मेयर र उपमेयरबीच झगडा सुरु भएको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको झगडाले उग्र रुप लिएपछि उनीहरुबीच बोलचाल नै बन्द भएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार बैठकमै मेयर र उपमेयरबीच आज भोली हात हालाहालको अवस्था हुने गरेको छ ।
विकास निर्माणदेखि नयाँ योजनमा मेयर शाक्यले एकलौटी गरेकाले आफूले विरोध गरेको उपमेयर खड्की बताउँछन् । उनले मेयर शाक्ले महानगरलाई एमालेको अखडा बनाउनु खोजेको खड्कीको आरोप छ । एमालेबाट शाक्य र काँग्रेसबाट खड्कीले जितेका थिए । नेपाल समाचरपत्रमा खबर छ ।